MSF oo dib u dhigtay Markab badbaado oo ay u diri lahayd xeebaha Liibiya | Hangool News
MSF oo dib u dhigtay Markab badbaado oo ay u diri lahayd xeebaha Liibiya
Hangoolnews:- Hay`adda gargaarka ee MSF, ayaa sheegeysa inay dib u dhigeyso markabka badbaadinta muhaajiriinta ee ay geyn lahayd badda Mediterranean-ka. MSF ayaa go`aankeeda u aaneysay in dowladda Liibiya ay ku soo rogtay xayiraado cusub.
Waxay xustay in Liibiya ay xayiraado saartay biyaha xeebteeda oo dad wax tahriibiya ay u isticmaalaan inay ka gudbiyaan muhaajiriinta u socota dalka Yurub. MSF ayaa sheegtay in taas beddelkeeda ay haatan caawineyso koox badbaadin ah.
Madaxa MSF, Loris De Filippi, ayaa sheegay in Midowga Yurub iyo Liibiyaanka ay iska kaashanayeen sidii looga badbaadin lahaa muhaajiriin badan inay naftooda ku halligaan badda.
Talyaaniga oo ay gaareen boqollaal kun oo muhaajiriin ah ayaa bilowgii bishan dejisay sharci cusub oo lagu doonayay in hay`adaha badbaadinta ay dhaqan-geliyaan. MSF ayaa ka mid ahayd hay`adaha diiday inay u hoggaansamaan.